Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Fibre Optical Node | Shiinaha Fiber optical Node Factory
ZBR804 Afarta Dariiqo Qaataha Aragtida Dibadda
1.0 Sharaxaadda Alaabada ZBR804 Afarta Dariiqo ee Qalabka Qaataha Dibedda wuxuu isku xiraa soo-qaadista isha isha hore, qaybinta iyo gudbiyaha gadaal, taas oo ah qalab dhaqaale, waxqabad sare iyo qalab faa'iido badan leh. Waxaa badanaa loo isticmaalaa dhamaadka shabakada fiilada indhaha, halkaasoo looga baahan yahay siyaabo badan oo heerar sare oo wax soo saar RF ah oo loo qaybiyo si toos ah loogu qoro, loona codsado waxqabadka laba-geesoodka ah. Sidan oo kale waxay yareyn kartaa qalabka wax lagu weyneeyo oo shabakadda ayaa ka dhigeysa mid la isku halleyn karo. Rakhku wuxuu qaataa biyaha cusub ee cusub ...
Afar qalabka wax lagu iibiyo ee dekedda oo leh waddo soo noqosho (ZBR8604-B)
Halbeegga Aragtida Wadada u Noqoshada Wadada Soo noqoshada Aragtida dhererka dhererka (nm) 1100 ～ 1600 Dhererka dhererka qaabilaada indhaha (nm) 1100 ～ 1600 Qiyaasta soo gelinta indhaha (dBm) -7 ～ + 2 Soosaarka Muuqaalka Guud (mW) 1 ～ 5 Nooca isku xira FC / APC, SC / APC Isku xirayaasha nooca FC / APC, SC / APC luminta milicsiga indhaha (dB) ≥45 Aragtida aragtida luminta (dB) ≥45 Iskuxirka dhimaalka Jidka Wadada Soo noqoshada CNR (dB) CSO (dBc) CTB (dBc) ＞ 51 ≤- 60 ≤-65 CNR (dB) CSO (dBc) ...
ZBR864B Node indhaha (Wax soo saar madaxbanaan)
Noocyada ◆ 1310nm iyo 1550nm laba jeer oo qalliin ah, Guryaha aluminium ee dhexdhexaadka ah, biyo nadiif ah iyo waxqabadka kuleylka kulaylka. Adopt farsamooyinka casriga ah iyo farsamada casriga ah, si loo sameeyo dusha sare ee qaababka jaakad ilaalin cufan, waxay leedahay waxqabadka wanaagsan ee kuleylka kuleylka, korontada marin-biyoodka iyo xinjirowga lidka ku ah (sida caadiga ah guryaha guryaha waxaa laga qaataa rinjiga lagu buufiyo ama caag lagu buufiyo, kala-baxa kuleylka ayaa ka hooseeya 15%). 4-wax soo saar sare oo madax banaan, waxay gaari kartaa 110dBμV, ajusta ...
ZBR1004R Aqbalaha indhaha gudaha
Hordhac ZBR1004R waa qalab qaata 19-inji 1U oo gudaha wax ku qaata, si qurxoon u qaabeysan, oo kufiican tusmada, qalabka wax lagu arko ee gudaha kujira waxaa lagu siin karaa modullada gudbiyaha wadada. Heerka sare ee helitaanka dareenka, hoos udhaca tirada dhawaaqa, afarta dariiqo ee soocelinta qaababka qaabdhismeedka qaab isku mid ah ayaa xaqiijinaya gudbinta tayada sare leh ee afarta calaamadaha gudbinta celinta. 20dB heerka wax soo saarka. Korontada waa AC220V. Astaamaha 1. Laba daaqadood oo shaqeynaya oo ah 1310nm ...